စင်္ကာပူနိုင်ငံထုတ် သဇင် Success မဂ္ဂဇင်းတွင်ပါရှိသော ၂၀၁၂ မြစိမ်းတောင် ဆရာတော် တရားစခန်းနှင့် ပတ်သတ်သောအင်တာဗျူး
(မဂ္ဂဇင်းတွင် ပါရှိသော Original PDF File ကို ဒီနေရာတွင် Click ပြီးဖတ်နိုင်ပါသည်။ )
တတိယအကြိမ်မြောက် မြစိမ်းတောင်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန ္တဇာနေယျ၏ ဝိပဿနာ(၉)ရက်တရား စခန်းကို စင်ကာပူနိုင်ငံ စိန်ဂျွန်းကျွန်း (St. John's Island) တွင် (၂၁-၀၁-၂၀၁၂ မှ (၂၉-၀၁-၂၀၁၂) နေ့ အထိ ၉ရက်ကြာ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ဒုလ္လဘ ရဟန်းခံသူ (၁၉) ယောက်၊ သီလရှင်ဝတ်သူ (၁၃) ယောက်၊ ယော ဂီ (၂၂၀) ကျော် စခန်းဝင် တရားအားထုတ်ခဲ့ကြပါသည်။
တရားစခန်းကို စင်ကာပူနိုင်ငံ အလုပ်ပိတ်ရက်ရှည် တရုတ်နှစ်သစ်ကူးတွင် စီစဉ်ခဲ့ရာ တကယ်တမ်း တွက်ဆ ကြည့်လျှင် သွားရေးလာရေးနှင့် အစားအသောက်ရိက္ခာများ သယ်ယူပို ့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများ အတွက် အလွန်ပင်ပန်းဆင်းရဲနိုင်ဖွယ်ရှိပါသည်။ ကုတင်၊ မွေ့ယာ၊ ကူရှင်ကအစ စိန့်ဂျွန်းကျွန်းသို့ သယ် ဆောင်ရသည်မှာ မလွယ်ကူလှသော်လည်း ဝေယျာဝစ္စအဖွဲ့နှင့် စီစဉ်သူများဖြစ်ကြသည့် ကိုဇော်မိုးစံနှင့် အဖွဲ့၏ ကြိုးပမ်းမှုကြောင့် ဒုလ္လဘရဟန်း၊ သီလရှင်နှင့် ယောဂီများအားလုံး စိတ်နှလုံး ချမ်းမြေ့ပြည့်စုံစွာ တရားအားထုတ်ကြရပါသည်။ သဇင် Succes မဂ္ဂဇင်းနှင့် ကိုဇော်မိုးစံ အင်တာဗျူးကို ဖတ်ကြည့် စေချင် ပါသည်။
Qး ဘယ်လို စိတ်ကူးစိတ်သန်းနဲ့ မြစိမ်းတောင် တရားစခန်းတွေ လုပ်ဖို့.. ဖြစ်လာခဲ့တယ် ဆိုတာလေး ပြောပြပေး စေချင်ပါတယ်။
Aး ၂၀၀၄ ခုနှစ်လောက်မှာ မြစိမ်းတောင်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့တရားတော်တွေ စင်္ကာပူမှာ စတင်နာ ကြား ဖြစ်ကတည်းက ဆရာတော်ရဲ့တရားတော်တိုင်းမှာ တရားအားထုတ်ချင်အောင် အမြဲဟောပြဆုံးမ ပေး တဲ့ သံဝေဂရစရာ တရားတွေ၊ ရှုနည်း မှတ်နည်းနဲ ့ပတ်သတ်ပြီး မရှင်းမလင်း ဖြစ်နေတာတွေကို အ လေးပေးပြီး ရှင်းပြပေးထားတာ သတိထားမိပါတယ်။ အဲဒီအချိန်တုံးကတော့ ဒီလိုဆရာတော်မျိုးကို စင်္ကာ ပူ ပင့်ပြီး တရားပွဲ ကျင်းပပေးနိုင်ရင် ကောင်းမှာပဲလို့ အတွေးဝင်မိခဲ့ပါတယ်။ အခုလောက် ဘာသာရေး နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တတ်တတ်ကြွကြွဆောင်ရွက်ကြတဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေ၊ Organiser တွေလဲ သိပ်မရှိသေး တော့ စိတ်ကူး သက်သက်ပဲ ရှိခဲ့ပါတယ်။
၂၀၀၇ ကစပြီး ဆရာတော် ဦးရာဇိန္ဒဦးစီးတဲ့ သတိပဌာန်ရိပ်သာ (Satipathana Meditation Centre) ရဲ့ အမှုဆောင် ကော်မတီဝင် အဖြစ် လုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ စင်္ကာပူမှာ အချိန်ပိုင်းတရားစခန်းတွေနဲ့မလေးရှား က ကိုတာတင်ဂီမြို့မှာ အချိန်ပြည့် ၄ရက် ၇ ရက်အစရှိတဲ့ တရားစခန်းတွေကို အကြိမ်တော်တော်များ များ တာဝန်ယူပြီး လုပ်နိုင်လာတဲ့ နောက်ပိုင်း မြစိမ်းတောင် ဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့ တရားစခန်း ကျင်း ပ လိုစိတ် ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါနဲ့ မြစိမ်းတောင်ဆရာတော်ဘုရားကို ပင့်လျှောက်ပြီး တရားစခန်းတွေ စီ စဉ် ဖြစ်တယ်လို့ ပြောလို ့ရပါတယ်။
Q: မြစိမ်းတောင်နဲ့ ကိုဇော်မိုးစံ ရဲ ့ဆက်နွယ်မှု
Aး မြစိမ်းတောင်ဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားတွေကို ၂၀၀၄ လောက်က စင်္ကာပူမှာပဲ ဓမ္မမိတ်ဆွေ တချို့ဆီက CD တရားခွေ ရပြီး စတင်နာဖြစ်ခဲ့တယ်။ အချိန်တော်တော်ကြာတဲ့အထိ ဘယ်ဆရာတော်ဟော နေမှန်း မသိခဲ့ဘူး။ CDအခွေပေါ်မှာ အင်္ဂလိပ်ဂဏန်း ၄ လုံးက လွဲပြီး ဘာမှ မပါပါဘူး။ တော်တော်ကြာမှ မြစိမ်း တောင် ဆရာတော်ဆိုတာ သိခဲ့ရတယ်။ ဓါတ်ပုံအနေနဲ့လည်း တရားတွေ စ နာဖြစ်ပြီး ၂နှစ် လောက် နေမှ ဖူးတွေ့ခွင့်ရတာ။ နောက်ပိုင်း ရန်ကုန်ပြန်တော့ ဆရာတော့် တရားထဲမှာပါတဲ့ ဆရာ တော်ရဲ ့ဒကာ ဦးသန်းလွင်(မြန်မာ့အသံ)ရဲ ့အိမ်လိပ်စာကို လိုက်ရှာပြီး၊ ဆရာတော် ဆီကိုပို့ပေးဖို့ အ ကူအညီ တောင်း ခဲ့ရာက ကိုယ်တိုင် ပထမဆုံးအကြိမ် သွားဖူးခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းအခေါက်တွေမှာ ဆရာတော်ကို စင်္ကာပူမှာ တရားလာပြပေးဖို့ လျှောက်တော့လည်း အချိန်တော်တော်ကြာကြာ ကြိုးစား ပြီးမှ ဆရာတော် က လက်ခံခဲ့တာပါ။ ဆရာတော် စင်္ကာပူကို ပထမဆုံး အကြိမ်ကြွပြီးတော့လည်း ဒုတိယ နေ့အထိ မြန်မာ ပြည်မှာလာပင့်တဲ့ ဒကာမှန်း ကျနော့်ကို မသိပါဘူး။ တရားစခန်းကိစ္စအတွက် လိုအပ် တာတွေ သွား လျှောက်တဲ့အချိန်ှ ဘေးက ဦးပဉ္ဒင်းတွေပြောမှ ကျနော့်ကို သိတာပါ။
Q: စိတ်ကူး စရလာတာက အစ ခုလို တတိယအကြိမ်မြောက် (၉)ရက် တရားစခန်းကို အောင် အောင်မြင်မြင် ကျင်းပနိုင်သည်အထိ ချီတတ်လာခဲ့တဲ့ ခရီးစဉ်အဆင့်ဆင့် (Mile Stone) လေး အကျဉ်းချုပ် သိပါရစေ။
Aး ၂၀၀၇ မှာ ကျနော်တို့ ဆရာတော် ဦးရာဇိန္ဒဦးစီးတဲ့ သတိပဌာန်ရိပ်သာ (Satipathana Meditation Centre) က ကော်မတီမှာဝင်ပြီး Volunteer အဖြစ် ဝင်လုပ်ရင်းနဲ့ တလတကြိမ် လုပ်တဲ့ Group Meditation Session တွေမှာ တာဝန်ခံအဖြစ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုလက်ရှိလည်း SMC က ကော်မတီမှာ လုပ်နေဆဲပါပဲ။ အဲဒီတုန်းက ပုံမှန် အချိန်ပိုင်းယောဂီ ၂၅၊ ၃၀ လောက်ရှိပါတယ်။
အများအားဖြင့် စင်္ကာပူမှာ အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ ကျနော်တို့တွေ တရုတ်နှစ်ကူးမှာ မြန်မာပြည် မပြန်ဖြစ် ဘူးဆိုရင် အားလပ် ကြတာကို သတိထားမိပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ် တရုတ်နှစ်ကူးပိတ်ရက် ၄ရက် မှာ နေ့ တရားစခန်းကို ယောဂီ ၃၀၊ ၄၀ လောက်နဲ့ SMC မှာလုပ်ဖို့စိတ်ကူးရပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက SMC က Tiong Bahru MRT နားက Old Havelock Road မှာပါ။ ဒါနဲ့SMS နဲ့ ကြေငြာလိုက်တာ အံ့သြ လောက်အောင် လူ ၁၀၀ ကျော်လောက် စာရင်းပေးကြပါတယ်။ အဲဒီအချိန်တုံးက လူတရာ လောက် ဆိုတာ အမှန်တန်များတဲ့ ပမာဏလို့ဆိုလို့ရပါတယ်။ တကယ်တမ်း ကျနော်တို့ လက်ခံနိုင် တာ က ယောဂီ ၃၀ သာသာ လောက်ပါ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလူတွေကို အကုန်လုံးကို တရားထိုင်နိုင်အောင် စီစဉ်ပေးနိုင်ရင် အရမ်းအကျိုး များမယ်ဆိုတာစဉ်းစားမိပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဖြစ်အောင်စီစဉ် မယ် လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး နေရာ ရှာပါတယ်။ အဲဒီအချိန်က စင်္ကာပူမှာ ယောဂီ ၁၀၀လောက်နဲ့ နေ့တရားစခန်း လုပ်ပေးဖို့ကို အချိန်တိုအတွင်းမှာ နေရာရှာတာ ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်။ နောက်ဆုံး သတိပဌာန်ရိပ်သာက ဆရာတော်ကြီး ဦးရာဇိန္ဒအဆက်အသွယ်နဲ့ စင်္ကာပူကနေ ကီလို ၆၀ လောက်ဝေး တဲ့ မလေးရှား ကိုတာတင်ဂီမြို ့က သနိ ္တသုခရာမ ရိပ်သာ( Santisukharama Hermitage) မှာ တရား စခန်း သွားလုပ်ဖို့စီစဉ်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီရိပ်သာက မလေးရှားက တရုတ်လူမျိုး ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးနဲ့တရုတ်လူမျိုးဒကာ၊ ဒကာမတွေ ဦးစီးတည်ထောင်ပြီး ပဏ္ဍိတရာမ ရွှေတောင်ကုန်း ဆရာတော်ကြီးရဲ့ သြဝါဒခံထားတဲ့ကျောင်းပါ။ အရင်ထဲကတည်းက တရားစခန်းကို အခမဲ့လို့ ကြေငြာ ထားတဲ့အတွက် မလေးရှားခရီးစဉ်ကိုလဲ ခရီးစရိတ်က အစ အခမဲ့ပဲစီစဉ်လိုက်ပါတယ်။ စုစုပေါင်း ယောဂီ ၆၀ ယောက်နဲ့ ၄ရက်လုံး အချိန်ပြည့် အားထုတ် နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ တချို့လဲ ဗီဇာအဆင်မပြေတာနဲ့ မ လိုက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီနောက်ပိုင်း သတိပဌာန်ရိပ်သာက ဆရာတော်ကြီး ဦးရာဇိန္ဒနဲ့ ကိုတင်တာဂီမှာပဲ တရားစခန်းတွေကို ၂၀၀၉ ဧပြီလအထိ ၄ရက် ၇ရက် အစရှိသဖြင့် စုစုပေါင်း ၄ကြိမ်၊ စင်္ကာပူက သတိ ပဌာန် ရိပ်သာမှာလဲ ၃ရက်၊ ၄ရက် တရားစခန်းတွေ အခြေအနေပေးတိုင်း အကြိမ်တော်တော်များများ ကျင်းပဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်ကစပြီး ၂၀၁၁ အထိ မြစိမ်းတောင်ဆရာတော် နဲ့ ကိုတာတင်ဂီမှာ (၉) ရက်တရားစခန်း ၂ ကြိမ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာတော့ နေရာ အနေအထားအရယောဂီ ၈၀၊ ၉၀ လောက်ပဲ လက်ခံလို ့ရပါတယ်။
St. John's Island မှာလုပ်ဖြစ်သွားတာနဲ ့ပတ်သတ်ပြီးပြောရရင်တော့ အရင်က တရားစခန်းကို မလေး ရှားက ကိုတာတင်ဂီမှာပဲ လုပ်နေကြ၊ အဲဒီမှာက နေရာအထားအရ တောထဲမှာဆိုတော့ အမတန် တိတ် ဆိတ် အေးချမ်းပြီး ယောဂီတွေ အတွက် တကယ်သင့်တော်တဲ့ နေရာဖြစ်တယ်။ တရားရိပ်သာအတွက် ဖွင့်ထားတာဆိုတော့ စီစဉ်ရတာလွယ်တယ်။ စင်္ကာပူက ဘာပစ္စည်းမှ သိပ်ပြီး သယ်စရာမလိုဘူး။ ယောဂီ ၈၀၊ ၉၀ လောက်ကို ကျနော်တို့လုပ်အားပေး ၅ ယောက် ၆ယောက်လောက်နဲ့ နိုင်အောင် လုပ်နိုင် တယ်။ ဒါပေမယ့် လူအများကြီး လက်မခံနိုင်တာရယ်၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးက ဗီဇာတွေ ဘာတွေ ယူရတယ်ဆိုတော့ နည်းနည်းထောက်တယ်။ ဒါနဲ့ စင်္ကာပူမှာ တရားစခန်းလုပ်ဖို့ စဉ်းစားတဲ့အခါ St. John's Island ကိုသွားတွေ့တယ်။ သေချာသိရအောင် ၂၀၁၀ ခုနှစ် စက်တင်ဘာမှာ ဆရာကြီး ဦးဂို အင်ကာ တရားစခန်းဝင်ရင်းနဲ့ အခြေအနေ လေ့လာခဲ့တယ်။ နေရာကို တော်တော်သဘောကြပေမယ့် စီစဉ်ရတာ အထူးသဖြင့် ပစ္စည်းတွေ သယ်ဖို့ တော်တော် ခက်မယ်ဆိုတာ သတိထားမိတယ်။ ဘယ်လို ဖြစ်ဖြစ် လုပ်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး လိုချင်တဲ့ရက်ကို ကြိုးစားတာ အခုဒီနှစ် ၂၀၁၂ မှာ အဆင်ပြေသွားတာ။
Q: စင်္ကာပူမှာ ' မြစိမ်းတောင် ' လိုပဲ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ကြတဲ့ ဘာသာရေးအဖွဲ့ အစည်း တွေ (သိသလောက်) ဘယ်နှစ်ခုရှိပါသလဲ။
Aး စင်္ကာပူမှာ ကျနော်သိသလောက် ဘုန်းကြီးကျောင်း ၁၃ ကျောင်းနဲ့ သီလရှင်ကျောင်းက ၂ ကျောင်း၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့ အစည်းက ၆ခုလောက်ရှိမယ်ထင်တယ်။
Q: ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းအချင်းချင်း ဘယ်လို အဆက်အသွယ် အကူအညီ ရပါသလဲ။
Aး စင်္ကာပူမှာ ဘာသာရေးလုပ်နေတဲ့ လူတွေအားလုံး တော်တော်များများပေ့ါ တစ်ယောက်နဲ့ တစ် ယောက် သိကြ၊ ရင်းနှီးကြပါတယ်။ သူ ဦးဆောင် လုပ်ရင် ကိုယ်ကူညီ၊ ကိုယ်ဦးဆောင်လုပ်ရင် သူကူညီ ပေါ့။ ဘာပဲလုပ်လုပ် တတ်နိုင်ဘက်က ဝိုင်းဝန်း ကူညီကြပါတယ်။ ဒီနှစ်တရားစခန်းက ခါတိုင်းနှစ်တွေ မတူပဲ ဒုလ္လဘရဟန်းခံပွဲတွေရော၊ သီလရှင်ဝတ်ပွဲတွေရော ပြီးတော့ ယောဂီကလဲ ၂၂၀ ကျော်ဆိုတော့ တော်တော်ကြီးကျယ်သွားတယ်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေ၊ သီလရှင်ကျောင်းတွေ ဘာသာရေး လုပ်နေတဲ့ သူ တွေ အကုန်လုံး အဘက်ဘက်က ဝိုင်းဝန်းကူညီကြပါတယ်။ စင်္ကာပူမှာ တကယ့်ကို တတ်တတ်ကြွကြ နဲ့ ကူညီ ချင် ကူညီနိုင်တဲ့ လူငယ်၊ တွေအများကြီးပါ။ သူတို့တွေရဲ ့အကူအညီတွေ၊ ဒီကဆရာတော် သံဃာ တော် တွေရဲ ့အကူအညီ မပါပဲ ဒီတရားစခန်းကြီးကို အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်ဖို့ မဖြစ်နိုင် ပါဘူး။
Q: အင်အားအကောင်းဆုံး ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းက ဘယ်အဖွဲ ့အစည်းဖြစ်ပါသလဲ။
Aး ဘာသာရေးနှင့် ပတ်သတ်ပြီး အင်အားအကောင်းဆုံး အဖွဲ ့အစည်းဆိုတာကိုတော့ ဖြေဖို့ခက်ပါ လိမ့်မယ်။ လူအင်အား အရေအတွက် အရ ပြောတာလား၊ ဆောင်ရွက်တဲ့ Event ပမာဏ အကြီးအသေး ကိုပြောတာလား၊ ဆောင်ရွက်တဲ့ အကြိမ် အနည်းအများ အပေါ်မူတည်လားဆိုတာ ပေါ်မှာ မူတည်မယ် ထင်ပါတယ်။
Q: ဘယ်လိုအခက်အခဲမျိုးတွေ ဖြတ်သန်းခဲ့ရပါသလဲ ?
Aး ကျနော်သိရသလောက် စင်္ကာပူမှာ ဘာသာရေးဆောင်ရွက်နေကြတဲ့အဖွဲ ့အစည်းတွေအားလုံးရဲ့ အဓိက အခက်အခဲက နေရာ အခက်အခဲဖြစ်ပါတယ်။ တရားစခန်းတွေအတွက် လိုချင်တဲ့ အချိန်မှာ လိုချင် တဲ့နေရာဖို့ တော်တော်ခက်ခဲပါတယ်။ နောက်တခုက အချိန်ရှားပါးမှုပါ။ အားလုံးက မအားတဲ့ ကြားထဲက အချိန်ကို အလုအယက်ယူပြီး လုပ်နေကြရတယ်။ ကျနော်တို့ဆို တရားစခန်းမတိုင်ခင် တစ်လ ခွဲ အလိုလောက်ထဲက ရုံးအလုပ်တော်တော်များကို ပစ်ထား နောက်ရွှေ့လို့ရတဲ့ အလုပ်မှန်သမျှ နောက်ရွှေ ့၊ အလုပ်တွေဖျက်ပြီး စီစဉ်ခဲ့ရတာပါ။ အားတဲ့အချိန်မှ လုပ်မယ်ဆိုလို့ အချိန်မလုံလောက် ပါဘူး။
Q: ရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူး ပီတိတွေရှိရင် သိပါစေ...
Aး စိတ်ခံစားမှုကို ပြောရရင်တော့ ယောဂီတွေ တရားထိုင်နေတာ၊ တရားကို လေးလေးစားစား ရှုမှတ် နေ တာ တွေ့ မြင်ရရင် ကျနော်တို့တွေအားလုံးရဲ ့အပင်ပန်းခံစီစဉ်နိုင်မှုကြောင့် လူတွေ (ယောဂီတွေ) အများကြီး သာသနာတွင်းမှာမှ ပြုနိုင်တဲ့ အမြတ်ဆုံး ကုသိုလ်ပြုဖြစ်တဲ့ ဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ် ခွင့်ရကြတယ်ဆိုပြီး ကျေနပ် ပီတိဖြစ်မိပါတယ်။ ပင်ပန်းခဲ့သမျှလည်း အကုန်ပြေပျောက်သွားပါတယ်။ နောက်တခုက ကျနော်တို့ အဖေငယ်ငယ်လေးထဲက ပြောဖူးတာကို စိတ်ထဲမှာ စွဲနေတာ တခုရှိတယ်။ တသက်လုံး လုပ်တဲ့ ဒါန၊ သီလ ကုသိုလ်ထက် နို့တညစ်စာအချိန်လောက် မေတ္တာဘာဝနာ ပွားတာက ပိုပြီး အကျိုးများတယ်။ အဲဒီထက် ဝိပဿနာတရားကို တချက်လောက် ရှုမှတ်နိုင်လိုက်တာက မေတ္တာ ဘာဝနာ ပွားတာထက် အကျိုးများတယ်လို့ ဆုံးမခဲ့ဖူးတယ်။ စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင် အခုအားထုတ်နေတဲ့ ယောဂီတွေ ကုသိုလ်တွေ အသေင်္ချေ အနန ္တ ရနေကြတယ်ဆိုတာ အသေအချာ သိနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ အချိန်တွေကို ဘယ်အချိန် ပြန်တွေးတွေး တကယ်ကြည်နှူး ဝမ်းသာရပါတယ်။ အားထုတ်ခဲ့တဲ့ ယောဂီ တွေ၊ ကျန်တဲ့ ဝေယျာဝစ္စ ပြုခဲ့သူတွေအားလုံးလဲ ဒီလိုပဲ ပြန်တွေးတိုင်း ကြည်နူးဝမ်းသာ နေကြ မှာပါပဲ။
လက်တွေမြင်နိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးကတော့ ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တိုက်ကြီးမြို့နယ်၊ လိမ္မော်ခြံ ကျေးရွာ အရှေ့ဘက် ရိုးမတောထဲမှာရှိတဲ့ တရားရိပ်သာကို စင်္ကာပူကနေ အထိုက်အလျှောက် ထောက် ပံ့ နိုင်နေပါတယ်။ ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ရိပ်သာက မြို့နဲ့ ဝေးတဲ့နေရာမှာရှိတော့ အလှူရှင်တွေ အရောက်အပေါက်နည်းပြီး ချို့တဲ့ ပါတယ်။ စင်္ကာပူက ယောဂီ ဟောင်း တွေ ဓမ္မမိတ်ဆွေစုပြီး လစဉ် ဆွမ်းစရိတ်ထောက်ပံ့နေတာ အခုဆို ၂နှစ်ပြည့်ပါတော့မယ်။ နောက်ပြီး ၂ယောက် ခန်း အခန်း၄၀ ၃ယောက်ခန်း၈ ခန်း ပါဝင်ပြီး သိန်း ၁၃၀၀ လောက်ကုန်ကျတဲ့ RC နှစ်ထပ်အမျိုးသမီးယောဂီဆောင် တခုလည်း ဆောက်လှူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကလဲ ယောဂီတွေ ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေ က တကယ်လိုအပ်နေတဲ့ နေရာမှာ သာသနာအတွက် လှူချင်ကြတာရယ်၊ ဆရာတော် ဘုရားကြီး ကို ကြည်ညိုကြတာရယ်ကြောင့် လှူဒါန်းကြလို့ အောင်အောင်မြင်မြင် ဖြစ်သွားတယ်လို့ ဆိုလို့ရမယ်ထင်ပါတယ်။
Q: စင်္ကာပူမှ မြန်မာတွေက ပြည်တွင်းက မြန်မာတွေထက် ဘာသာရေး အလှူအတန်းမှာ ပိုစိတ်ဝင်စားကြတယ်ဆိုတာ မှန်ပါသလား။
Aး စင်္ကာပူကမြန်မာတွေက ဘာသာရေးကို ပိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာထက် ဘာသာရေးလုပ်ခွင့် ပိုရကြ တယ်လို့ ပြောလို့ ရမယ်ထင်တယ်။ မြန်မာပြည်က ဆရာတော်ကြီးတွေတော်တော်များများလဲ စင်္ကာပူ ကို ကြွကြတယ်ဆိုတော့ ဒကာ၊ ဒကာမတွေအနေနဲ့လည်း ဆရာတော်ကြီးတွေကို အနီးကပ်ဆည်းကပ် ပူဇော်ခွင့်ရကြတယ်။ ဒီလိုဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့ တရားစခန်းတွေ၊ တရားပွဲတွေဆိုလဲ စင်္ကာပူမှာ တနှစ် ပတ်လုံး မပြတ်ပါဘူး။ စင်္ကာပူက မြန်မာတွေထဲမှာ ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး တတ်တတ်ကြွကြွ ဦး ဆောင်လုပ်တဲ့သူတွေ၊ လုပ်နိုင်သူတွေ တော်တော်များတယ်ဆိုတော့ ဘာသာရေး လိုက်စားသူတွေ အတွက် အခွင့်အလမ်းက အပြည့်ပါ။ နိုင်ငံကလဲ ကျဉ်းတော့ အားလုံးစုစုစည်းစည်း နဲ့ လုပ်နိုင်ကြတယ်။ တခုက ဘာသာရေး Activity တွေများလာတာနဲ ့အမျှ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ ့မိတ်ဆွေကောင်းတွေရဲ့ တိုက် တွန်းမှု ့ကြောင့် စင်္ကာပူက မြန်မာတွေထဲမှာ ဘာသာရေး စိတ်ဝင်စားသူတွေ ပိုလာတယ်လို့လဲ ပြောလို့ရနိုင်ပါတယ်။
Q: ဘယ်လို အကူအညီတွေ လိုအပ်ပါသေးသလဲ ?
Aး အကူအညီအနေနဲ့တော့ ဝေယျာဝစ္စလုပ်အားလိုမျိုးပေါ့။ အထူးသဖြင့် ပိတ်ရက်မဟုတ်တဲ့ ရက်မျိုး တွေမှာ လုပ်အားပေးနိုင်တဲ့သူ ရှားပါတယ်။ နောက်ပြီး တရားပွဲ၊ တရားစခန်းတွေအတွက် နေရာတွေနဲ ့ပတ် သတ်လို့ Information အဆက်အသွယ် အကူအညီ လိုပါတယ်။
Q: ဘာတွေ ဆက်လုပ်ဖို့ ရည်ရွယ်ပါသေးသလဲ ?
Aး စင်္ကာပူမှာရှိနေသရွေ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ လူမျိုးဘာသာ သာသနာအတွက် တတ်စွမ်းသမျှ ဆက်လုပ်သွား မှာပါ။ မြန်မာပြည်ပြန်တော့လဲ မြန်မာပြည်အလျှောက်ပေါ့၊ မိမိ အတွက် အများအတွက် တတ်နိုင်သမျှ ကိုယ်စွမ်း ဉာဏ်စွမ်းရှိသမျှ ဆက်လုပ်သွားဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။
Q: စင်္ကာပူမှာ ရွှေတိဂုံဘုရားလို (ဒါမှမဟုတ်) ဟောင်ကောင်တို ့၊ ဂျပန်ပြည်မှာလို ဗုဒ္ဓရုပ်ပွား တော်ကြီး တည်ထားဖို့ စိတ်ဝင်စား ပါသလား?
Aး လုပ်နိုင်သူတွေ လုပ်ကြရင်တော့ ကောင်းပါတယ်။ ကျနော်ကတော့ စိတ်ကူးမရှိသေးပါဘူး။
Q: သဇင် Success မဂ္ဂဇင်းက တဆင့် ဘာပြောချင်ပါသေးသလဲ ?
Aး စာဖတ်သူတွေအားလုံး ကျနော်တို့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ တရားစခန်းတွေ၊ လှူဒါန်းထောက်ပံ့မှုနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး စိတ်ဝင်စားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် တရားတော်တွေနာလိုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် www.myaseintaung.net မှာဝင်ကြည့်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဆက်စပ် လင့်ခ် .
၂၀၁၂ခုနှစ် မြစိမ်းတောင်ဆရာတော် တရားစခန်း (စင်္ကာပူ) ဓါတ်ပုံများ Click here
အထူးကျေးဇူးတင်လွှာ (၂၀၁၂ခုနှစ် တရားစခန်း) Click here
Copyright © 2010. Mya Sein Taung. All Rights Reserved